Isiphandla sezikhali se Fuleyisitata
Isiphandla sezikhali se Fuleyistata sethulwa ngokomthetho ngoMeyi 7, 1999. Inesisekelo esinezinto eziningi eziluhlaza okwesibhakabhaka, ama-browns nama-beiges abonisa umhlaba waseFree State.
Isiqubulo esithi KATLEHO KA KOPANO - esibhalwe ngesiSuthu sisho ukuchuma ngobunye. Isihlangu sinemibala eluhlaza, ephuzi nohlaza okwesibhakabhaka. Iluhlaza lumelela izitshalo ezihlaza, isibhakabhaka esibhakabhakeni kanye nohlobo oluhlaza okwesibhakabhaka se-Eastern Free State.
Phakathi nendawo ye-yellow shape i-Orange River Lily yomdabu. Phezulu kwesihlangu umqhele okhishwe ngamadayimane kanye nama-corn cobs abamele umhlaba ocebile wezolimo kanye namagugu ezimayini eFree State. Izisekeli zingama-cheetah amabili.
Isifanekiselo Sesilwane - Ingulule (Acinonyx jubatus)
Ngomzimba owenziwe nge-greyhound, imilenze ende, inhliziyo enkulu namapayipi namavesi amaningi omzimba, i-cheetah yakhiwe ngesivinini. Empeleni, yisilwane esincane esisheshayo emhlabeni. Ingulule iyingxenye yomndeni wekati, nakuba ibheka inja efana nayo, futhi ayinayo ihlumela elihlehlisiwe, njengamanye amanye amakati. Ukugcina i-claws out kusiza ngokugcina isivinini uma ushaja.
Umsila omude we-cheetah usetshenziselwa ukugudluza kanye nokusimama lapho ugijima ngokugcwele ngemva kokudla. Ukusheshisa kwe-cheetah kuyibona ukubona, kusukela ekugubheni kuze kube ngesivinini esigcwele ngaphansi kwe-60 m ngokuhamba ngesivinini kufika ku-114 km \_ h.
Ukudla kwabo, okungukuthi okunye okuvela e-scrub hare kuya ku-antelope encane kuzama ukugwema ngokujulile ukuthungwa kwe-cheetah ngokugaya nokwehla phakathi kwamahlathi nezihlahla. Ngokuvamile umjaho wejubane, ubuqili kanye nokuqina komuntu olahlekile ongadliwa noma olambile.
U-Cheetah cishe ungumzingeli ophumelelayo kunanoma iyiphi enye ikati elikhulu, lapho ethatha isisulu sakhe ngokumangala. Kodwa-ke, njengoba zilula kakhulu kunezinye amakati amakhulu zivame ukulahlekelwa ukudla kwazo ezingonyameni nasezingweleni, ikakhulu njengoba ziqala ukubamba umoya ngaphambi kokuba ziqale ukupha. Izingulule zinendawo ezisemakhaya kunendawo, abayibonisa ngomchamo, kodwa azivikele ngokulwa. Ama-coalitions of brothers cheetah avamile.
Isifanekiselo Sembali - i-Orange River Lily (Crinum bulbispermum)
I-Orange River lily isitshalo esikhulu esingaba sikhule sibe ngu-1m ubude. Iqukethe amaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka, isiqu eside futhi silenga izimbali ze-lily, ezibomvu ezinezimpawu ezibomvu ku-petal ngayinye. Njengoba igama liphakamisa, lezi zimbali zikhula emanzini asempumalanga nasemagqumeni ashisayo.
Izimbali zinephunga elimnandi kodwa eligulayo eliheha izinambuzane zokuvuna impova. Izimbali ze-Orange River ziyaqhakaza phakathi nezinyanga zasehlobo. Lapho izimbali ziwa, izithelo zikhiqizwa nge-capsule enkulu e-pink equkethe imbewu. Imbewu ihlumela futhi ihlume ngokushesha lapho ifika emhlabathini.
Ama-bulbs avikelwe yizingxenye zezilinganiso ze-bulb bulb, ezenza njengendlela yokuvikelwa phakathi nezinyanga ezomile zasebusika. Orange River lily isetshenziselwa imithi yendabuko ukusiza ekunciphiseni i-rheumatism, imivimbo ye-varicose nokunciphisa ukuvuvukala. Kukholelwa ukuthi, abanye, ukuvikela amakhaya kusuka ebubini.